महानगरपालिकाले भन्यो, ‘हामी फोहर उठाउँदैनौं घर भित्रै राख्नुस्’ के हो कारण ? – Dailny NpNews
महानगरपालिकाले भन्यो, ‘हामी फोहर उठाउँदैनौं घर भित्रै राख्नुस्’ के हो कारण ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: १४:५९:३२
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो घरवाट निस्कने फोहर केही दिन घरभित्रै राख्न आग्रह गरेको छ । फोहर सडकमा यत्रछत्र हुन थालेपछि महानगरपालिकाले यस्तो आग्रह गरेको छ । महानगरले अझै केही दिन फोहोर नउठाउने जनाएको छ ।
महानगरले उपत्यकाभित्र उत्सर्जित फोहोरमैला विसर्जनका लागि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा पु¥याउने गरेको थियो ।
हाल ल्यान्डफिल साइटको सडक बिग्रेकाले मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यता केही दिनदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा काठमाडौंका सडकमा फोहोरको डंगुर देखिन थालेको छन् । सडकमा हिड्दा पनि नाक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक दुर्गन्धित हुनेगरी फोहर थुप्रन थालेपछि महानगरले घरभित्रै केही दिन ब्यवस्थापन गर्न भनेको हो ।
यद्यपि केही दिन फोहोरलाई घरभित्रै राख्न महानगरले अनुरोध गरेको छ । महानगरले सोमबार सूचना जारी गर्दै अझै केही दिन फोहोर नउठाइने बताएको छ । सुचनामा भनिएको छ, ‘ल्यान्डफिल्ड साइट सुचारु भएपछि फोहोर लिन घर दैलोमा आउने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं ।’